ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): တပို့တွဲ လပြည့်နေ့
ဘုရားရှင်တို့သည် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ...
- တပို့တွဲလပြည့်နေ့ ကြုံကြိုက်ခြင်း၊
- ဆဠာဘိည ပဋိသမ္ဘိဒါ ပတ္တ ရဟန္တာချည်းဖြစ်ခြင်း၊
- မည်သူမျှ မပင့်ဖိတ်ဘဲ စုဝေးမိခြင်း ...
ဤ အင်္ဂါ လေးချက်နှင့် ပြည့်စုံမှ ပြမြဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် အထက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါလေးရပ်နှင့် ပြည့်စုံသော ကဿပညီနောင် ရှင်တထောင်၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်နှင့် တပည့် ၂၅၀၊ စုစုပေါင်း ရဟန္တာ ၁၂၅၂ ပါးတို့အား ဂါထာသုံးပုဒ်ဖြင့် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ပြတော်မူပါသည်။ သြဝါဒပါတိမောက်ဂါထာသည် သီလ, သမာဓိ, ပညာကို ဟောကြားထား၍ ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ အနှစ်ချုပ်တရားဟု ခေါ်ပါသည်။ သြဝါဒပါတိမောက်ဂါထာအတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံပါက ကိုယ်, နှုတ်, စိတ် ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး အို, နာ, သေ လွတ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဩဝါဒပါတိမောက် ပါဠိ -မြန်မာ
" ခန္တီ ပရမံ တပေါတိ တိက္ခာ၊ နိဗ္ဗာနံ ပရမံ ဝဒန္တိ ဗုဒ္ဓါ၊
န ဟိ ပဗ္ဗဇိတော ပရူပဃာတီ၊ န သမဏော ဟောတိ ပရံ ၀ိဟေဌယန္တော "
လွန်စွာ ချုပ်တည်းမှုဟူသော သည်းခံခြင်းသည် အလွန်မြတ်သော အကျင့်ပေတည်း။
နိဗ္ဗာန်တရားကို အမြတ်ဆုံးဟူ၍ ဘုရားရှင်တို့ ဟောတော်မူကုန်၏။
သူတပါးကို သတ်သောသူသည် စိတ်အညစ်အကြေးကို နှင်ထုတ်သူမဟုတ်။
သူတပါးကို ညှဉ်းဆဲသောသူသည် မကောင်းမှုတို့ကို ငြိမ်းစေသူမဟုတ်။
သဗ္ဗပါပဿ အကရဏံ၊ ကုသလဿ ဥပသမ္ပဒါ၊
သစိတ္တ ပရိယောဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။
မကောင်းမှု ဟူသမျှကို မပြုလုပ်ရာ။
မိမိစိတ်ကို သန့်ရှင်း ဖြူစင်စေရာ၏။
ဤသည်ကား ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ပေတည်း။
အနူပ ၀ါဒေါ အနူပ ဃာတော၊ ပါတိမောက္ခေစ သံဝရော။
မတ္တညုတာစ ဘတ္တသမ္မိ ံ၊ ပန္တဥ္စ သယနာ သနံ၊
အဓိစိတ္တေစ အာယောဂေါ၊ ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။ .. ။
သူတပါးကို မစွပ်စွဲ မပြစ်မှားရာ။
သူတပါးကို မညှဉ်းဆဲ မနှိပ်စက်ရာ။
မြတ်သောသီလ၌ စောင့်စည်း လုံခြုံရာ၏။
စားသုံးဖွယ်၌ ပမာဏကို သိရာ၏။
အစွန်အဖျား ကျောင်းအိပ်ရာ၌ နေရာ၏။
ထူးမြတ်သောစိတ်၌ လွန်စွာ အားထုတ်ရာ၏။
မြန်မာပြန် အဓိပ္ပါယ်ကို တစ်ချက်ချင်း ပြန်ကြည့်ရင် -
၁။ သည်းခံတဲ့အကျင့်ဟာ အလွန်မွန်မြတ်တယ်။
(ခန္ဒီသည်းခံခြင်းတရားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကျောရိုး ကိုယ်ကျင့်တရားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သည်းခံခြင်းဆိုသည်မှာ အဓိပ္ဖါယ်ဖွင့်ဆိုလျှင် မိမိခန္ဒာကိုယ်ဝယ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လျက်ရှိသည့် သဘောတရားတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နာမှု၊ ကြင်မှု ကို အကြောင်းပြုပြီး မိမိစိတ်ဝယ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝေဒနာတရားတို့ကို အောင့်အီးကာ တုန့်ပြန်မှုတစ်စုံတရာမပြုဘဲ နေမှုပုံစံကို သည်းခံသည်ဟုခေါ်ပေသည်။
စင်စစ် မြတ်စွာ ဘုရားရှင် အလိုကျ သည်းခံမှုသည်ကား ထိုသို့မဟုတ်။ မိမိစိတ်ဝယ် အာရုံတရားတို့နှင့် တိုက်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော လိုချင်မှု လောဘတရားကို လည်းကောင်း၊ ထိုလိုချင်မှုတို့ကို မရသည့်အခါ လောဘကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒေါသတရားကိုလည်းကောင်း၊ ထိုဒေါသတရားကို အကြောင်းပြုပြီး ကုသိုလ် အကုသိုလ် ကောင်းမှု မကောင်းမှုကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့သည့် မောဟတရားကို လည်းကောင်း မချုပ်တီးဘဲထားသောအခါ ထိုလောဘ ဒေါသ မောဟတရားတို့သည် ကြာမြင့်စွာ ဖြစ်တည်လာသည်နှင့်အမျှ စွဲလန်းမှု ဥပါဒါန် အဖြစ်သို့ ရောက်သွားပေလိမ့်မည်။ ထိုလောဘ ဒေါသ မောဟ တရားတို့နှင့်တစ်ကွ ကိလေသာ ရန်မာန်အပေါင်းကို ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း၊ ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း ထိုတရားဆိုးတို့၏ နောက်သို့ မိမိ၏စိတ်ကို မလိုက်စေပဲ သတိတရားထားကာ မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်တတ်သော အကြောင်းတရားကို ခန္ဒီစ သည်းခံသည်ဟု ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သတိပဌါန် တရား လေးပါး၏ ရေသောက်မြစ်ဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။)
၂။ နိဗ္ဗာန် ဟာ အမြတ်ဆုံးပဲ။
(ဤအချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အဖို့ ရှင်းစရာ မလိုပေ။ ဘာသာခြားများ၏ ကောင်းကင်ဘုံ Heaven နှင့် မည်သို့မည်ပုံ ကွာခြားကြောင်းကိုတော့ သိသင့်သည်။)
၃။ သူတပါးကို ညှဥ်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စိတ် အညစ်အကြေးကို နှင်ထုတ်သူ မဟုတ်။
(တစ်နည်းအားဖြင့် ညစ်နွမ်းသောစိတ်၊ ကြမ်းတမ်းသောစိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သူ။ ထို့ကြောင့် သူတော်ကောင်း မဖြစ်နိုင်။)
၄။ သူတပါးကို နှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သူတပါးကို သတ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မကောင်းမှုတို့ကို ငြိမ်းစေသူမဟုတ်။
ပါဠိကို အဖြောင့်ယူရင် . . .၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပဗ္ဗဇိတလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သမဏလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဗြဟ္မဏလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး … ။
ပဗ္ဗဇိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှင်းဆဲခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း မလုပ်နဲ့ … ။
ဂါထာ ဒုတိယပိုဒ်ရဲ့ လိုရင်းကတော့ -
"မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင် စိတ်ကိုထား ". . . ပါပဲ။
ပြီးတော့ နောက်အပိုဒ်မှာ -
၅။ သူတပါးတို့ကို မစွပ်စွဲပါနဲ့ … ။
(လူတော်တော်များများက အပြုသဘော ဝေဖန်ထောက်ပြတာနဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်တာ မကွဲပြားဘူး။ သူတစ်ပါးကို စွပ်စွဲအပြစ်တင်တာဟာ အကျိုးယုတ်စေတဲ့ အပြင် အမုန်းတရားပါ ပွားများစေနိုင်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဒီနေရာမှာ ဆုံးမထားတာ ဖြစ်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။)
၆။ သူတပါးတို့ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့ … ။
(ဒါကတော့ အပေါ်ဆုံးအပိုဒ်ကိုပဲ ပြန်ညွှန်းရမယ်။ အရေးကြီးလွန်းလို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောတယ်လို့ မှတ်ယူသင့်ပါတယ်။)
၇။ ပါတိမောက္ခသီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ကြ ။
ဒီနေရာမှာ . . .
ရဟန်းတို့ရဲ့ပါတိမောက္ခသီလဆိုတာက ရဟန်းတော်တွေ မကျဆုံးအောင် စောင့်ထိန်းရမယ့်
(၂၂၇) သွယ်သော သိက္ခာပုဒ် သီလတွေကို ပြောတာ … ။
‪‎လူတို့မှာလည်း‬ လူ့ပါတိမောက္ခသီလဆိုတာ ရှိတယ် ။ လူတွေလည်းပဲ ဘဝဆုံးရှုံး မသွားအောင် ပါတိမောက္ခသီလကို စောင့်ရမယ် … တဲ့ ။
လူ့ပါတိမောက္ခသီလဆိုတာက ပါဏာတိပါတ၊ အဒိန္နာဒါန၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ရှောင်ကြ ။
မုသာဝါဒ၊ ပိသုဏဝါစာ၊ ဖရုသဝါစာ၊ သမၹပၸလာပဝါစာ ဝစီဒုစရိုက်လေးပါး ရှောင်ကြ … ။
မိစ္ဆာအာဇီဝကို ရှောင်ကြ … ။ အဲ့ဒီဥစ္စာကို အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ ခေါ်တယ် … ။
လူတို့အနေနဲ့ အဲ့ဒါဟာ လူ့ပါတိမောက္ခသီလပါပဲ … တဲ့။
သက္ကပဉှသုတ္တန်မှာ သိကြားမင်းက မေးလို့ ဘုရားက အဲ့လို လူ့ပါတိမောက္ခသီလကို ဖြေပေးထားတာ ။
ဒါကြောင့် ရဟန်းလည်းပဲ ရဟန်းရဲ့ပါတိမောက္ခသီလ ရှိသလို လူမှာလည်းပဲ လူ့ပါတိမောက္ခသီလ ရှိတယ် … လို့ မှတ်သားရမယ် ။ ပြီးရင် လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြရမယ် … ပေါ့ ။
ဘဝအောက်တန်းနောက်တန်း ကျမသွားအောင်၊ အပါယ်လေးပါးသို့ ကျရောက်မသွားအောင် အဲ့ဒီသီလ စောင့်ရှောက်ကြ … တဲ့ ။
၈။ စားသုံးဖွယ်၌ ပမာဏကို သိရာ၏။
("တန်ဆေး လွန်ဘေး" ပေါ့။ အစားအစာ တစ်ခုခုကိုစားရင် လူဖြစ်ဖြစ် ရှင်ဖြစ်ဖြစ် အတိုင်းအတာပမာဏ၊ အတိုင်းအရှည် သိပြီးတော့ စား၊ လွန်လွန်ကဲကဲ မစားနဲ့ … ။
၉။ အစွန်အဖျား ကျောင်း၊ အိပ်ရာ၌ နေရာ၏။
တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာ အစွန်အဖျားကျတဲ့နေရာမျိုးကို ပျော်မွေ့ရမယ် … မြတ်နိုးရမယ် … ။
လူစည်ကားတဲ့ မြို့လယ်ခေါင် ရွာလယ်ခေါင်ကို မကြိုက်ရဘူး၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်ကို ကြိုက်တတ်ရမယ် …ပျော်မွေ့နိုင်ရမယ် … တဲ့ ။
(ဒါကတော့ အနှောင့်အယှက်အာရုံတွေ ဝေးတဲ့ နေရာ၊ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ နေဖို့ တိုက်တွန်းချက်ပေါ့)
၁ဝ ။ ထူးမြတ်သောစိတ်၌ လွန်စွာ အားထုတ်ရာ၏။
"အဓိစိတ္တ"ဆိုတဲ့သမာဓိကို အလေ့အကျင့် လုပ် အားထုတ် … ။ စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လည်း လုပ်ထား … တဲ့ ။
လူရော ရှင်ရော မျက်မှောက်ဘဝမှာ အောက်ကျနောက်ကျ မဖြစ်ရအောင်၊ အောက်တန်း မကျအောင် …။ ဘဝသံသရာမှာလည်း အပါယ်လေးပါးဆိုတဲ့ အောက်တန်းဘဝတွေကို ရောက်မသွားအောင် … တဲ့ ။ ဘဝ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် မြင့်မြင့်တက်သွားအောင် အဲ့ဒီ သြဝါဒကို နားထောင်ကြ၊ လိုက်နာကြဆိုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားက ဩဝါဒပေးတယ် … ။
---- ---xxx xxx xxx- -- - -- -
အပိုမှတ်ရမှာက. . .
အဲ့ဒီသြဝါဒပါတိမောက်ပေးတဲ့ တပိုတွဲလပြည့်နေ့မှာပဲ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အရှင်မြတ် ရဟန္တာဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့တာ … ။
နောက်တစ်ခါ. . .
တပိုတွဲလပြည့်နေ့ဟာ ဘုရားနဲ့တပည့်သံဃာတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် သံဃာ့အစည်းအဝေးကျင်းပ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပထမသန္နိပါတ နေ့ … ။
အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာအဖြစ် ရောက်တဲ့နေ့ !
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သံဃာ့အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမသန္နိပါတ နေ့ !
နေရာ - မဂဓတိုင်း ၊ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက် ။
အချိန် - မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၃ ခုနှစ် ၊ တပိုတွဲလပြည့်နေ့ ။
တက်ရောက်သံဃာ - ရဟန်းဂေါတမနဲ့ အရွင္ သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် အမှူးပြုတဲ့ ဧဟိဘိက္ခု ရဟန္တာ အရှင်မြတ် ၁၂၅ဝ ။
လူရော ရှင်ပါ အောက်ကျနောက်ကျ ဘဝမျိုးက လွတ်မြောက်အောင် …
အောက်တန်းနောက်တန်းကျတဲ့ ဘဝမျိုးသို့ မကျရောက်ရအောင် …
သြဝါဒပါတိမောက်ကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံး၊ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ရှင့်ပါတိမောက္ခသီလ လူ့ပါတိမောက္ခသီလကို ကြိုးစားစောင့်ထိန်းရင်း ဘဝအဆင့်အတန်းကို မြင့်သထက် မြင့်အောင် မြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေ …။